MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Republic to the Republic of the Union of Myanmar
Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Republic to the Republic of the Union of Myanmar
by adminmofa on 24/07/2017 at 5:09 PM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Argentine Republic to the Republic of the Union of Myanmar.
Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein earned Bachelor’s Degree in Political Science specialization in International Relations from the Argentine Catholic University (USA), Buenos Aires. Since she graduated from the National Foreign Service Institute in 1980, she has served at the Ministry of Foreign Affairs and Worship as well as the Argentine Consulate General and Embassies abroad in various capacities. At present, she has been serving as Ambassador of the Argentine Republic to the Kingdom of Thailand. She speaks English, French and Italian.
Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein will be concurrently accredited as Argentine Ambassador to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok.
Dated: 24th July, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အာဂျင်တီးနား သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စ မာရီယာ အလစ်ရှာ ကာ့ဇိုနီ ဒီ ဆွန်ချိုင်းန် အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီ ပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စ အလစ်ရှာ ကာ့ဇိုနီ ဒီ ဆွန်ချိုင်းန် သည် အာဂျင်တီးနား ကက်သလစ် တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဘာသာရပ် အထူးပြုဖြင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမျိုးသား နိုင်ငံခြားရေးသင်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်ပြီးနောက် အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ အာဂျင်တီးနားကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးနှင့် သံရုံးများတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် သူမသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါ သည်။ သူမသည် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်နှင့် အီတလီဘာသာစကားတို့ကို တတ်ကျွမ်းသည်။
မစ္စ မာရီယာ အလစ်ရှာ ကာ့ဇိုနီ ဒီ ဆွန်ချိုင်းန် သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်။